उद्योगमा औद्योगिक सुरक्षा स्टिकर, बोटलर्स नेपालमा स्टीकर टाँसियो, सधै उद्योग चल्ने! :: BIZMANDU
उद्योगमा औद्योगिक सुरक्षा स्टिकर, बोटलर्स नेपालमा स्टीकर टाँसियो, सधै उद्योग चल्ने!
प्रकाशित मिति: Mar 10, 2018 9:49 AM
चितवन। उद्योगको सुरक्षा र औद्योगिक वातावरणका लागि सुरक्षा स्टिकर टाँस्न शुरु गरिएको छ ।
बिहीबार रत्ननगरबाट शुरु भएको सो अभियानअन्तर्गत आज भरतपुर महानगरपालिकाका विभिन्न उद्योगमा स्टिकर टाँसिएको छ । आज एक कार्यक्रमकाबीच भरतपुर महानगपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड भरतपुरको उद्योगमा स्टिकर टाँसेर महानगरका उद्योगमा स्टिकर टाँस्ने अभियानको शुभारम्भ गरिन्।
नगर प्रमुख दाहालले महानगरभित्र निर्वाध रुपमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गरिने बतार्इन। बन्द, हडताल र आन्दोलनका कारण निर्वाद रुपमा सञ्चालन हुननसकेका उद्योग, कलकारखाना फस्टाउन नसकेको दाहाले बतार्इन्।यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय आँपटारीका प्रहरी उपरीक्षक सुवर्ण थापाले राज्यले उद्योग कलकारखानाको सुरक्षाको जिम्मा दिएकाले त्यो जिम्मेवार पूरा गर्न तयार रहेको बताए।
आगामी दिनमा सुरक्षा व्यवस्था अझै चुस्त पारिने प्रतिवद्धता जनाउँदै उनले जनशक्ति कम भए पनि औद्योगिक सुरक्षामा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताए।
उद्योगमा औद्योगिक सुरक्षा स्टिकर, बोटलर्स नेपालमा स्टीकर टाँसियो, सधै उद्योग चल्ने! को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।